ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြစ် - နိုင်းလ်နှင့်အမေဇုံတို့အကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာ Absolut ခရီးသွားခြင်း
လူးဝစ် Martinez | | အခြားသူများကို
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုမေးခွန်းမေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစဉ်းစားမိသည့်မြစ်မဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိပ္ပံပညာ သဘောမတူဘူး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုက်နာရမည့်စံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မပင်ပါ။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်လိုလျှင်သင်ထောက်ပြလိမ့်မည် အမေဇုံ။ တဖန်သင်တို့လုံးဝမှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများကိုအခြေခံထားသည့်ကျွမ်းကျင်သူအများစုက၎င်းသည်၎င်းသည်ဟုပြောလိမ့်မည် နိုင်းလ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်တယ်ဆိုတာပဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုမည်သည့်စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်။
2.2 Aswan ဆည်
3.2 Iquitos, ပီရူးအမေဇုံ
3.3 Manaus, Amazonas ၏မြို့တော်
3.4 Belém, အမေဇုံမှဝင်ပေါက်
ရှေး ဦး စွာမြစ်၏အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ရန်လွယ်ကူပုံရသည်။ ၎င်းသည်မွေးရာပါနေရာနှင့်ပါးစပ်ကိုယူပြီးအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာရန်လုံလောက်သည်။ သို့သော်၎င်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ တည်ရှိ တစ်ခုတည်းရုပ်သံလိုင်းဖွဲ့စည်းရန်ပူးပေါင်းကြောင်းမြစ်လက်တက်။ ထို့ကြောင့်မြစ်တစ်စင်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်သည်ကိုအတိအကျဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်။
ထို့အပြင်အချို့ကျွမ်းကျင်သူများ၏စံနှုန်းအပေါ်မှီခိုနေစဉ် အရှည်, အခြားသူများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ပါ ၎င်း၏စီးဆင်းမှု။ ဆိုလိုသည်မှာရေကုဗမီတာအတွင်းပင်လယ်ထဲသို့စီးဆင်းစေသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးမြစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပုံရသည်။ သို့သော်သိပ္ပံပညာနှစ်ခုစလုံးဝန်ခံသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးမှာသင့်အားကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည် ဒေတာအားလုံး သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မြစ်နှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ နှင့်စကားမစပ်, ငါတို့ခရီးသွားလာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကတည်းက ဝဘ်သူတို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့လှပတဲ့နေရာတချို့ကိုငါတို့ပြမယ်။
အရင်ကငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်းလ်၏မွေးရပ်မြေသည်မရှင်းလင်းပေ။ ဒါဟာအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လူသိများသည် အနောက်ပိုင်းတန်ဇန်းနီးယား နှင့်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများကအတွက်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နေရာ အိုင်ဗစ်တိုးရီးယား။ သို့သော်ဤlakeရာမအိုင်ကြီးကိုမြစ်များကထောက်ပံ့ပေးသဖြင့်နိုင်းလ်မြစ်၏နေရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိရသည် Kagera မြစ်၎င်း၏အကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်။
ပထမကိစ္စတွင်အာဖရိကမြစ်ကြီးသည်အရှည်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဤအကြပ်အတည်းသည်သက်ဆိုင်သည် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ။ သို့သော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနှင့် အကယ်၍ Kagera ကိုမွေးရပ်မြေအဖြစ်ယူလျှင်၎င်းသည်ခရီးသွားလိမ့်မည် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ.
ရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်ဤမြစ်လက်တက်သည်အကိုင်းနှစ်ချောင်းရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည် White Nile, အဘယ်သူ၏မွေးရပ်နိုင်ငံပါလိမ့်မယ် ရဝမ်ဒါ နှင့် Great Lakes ဒေသကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်ဟု ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒုတိယဖြစ်လိမ့်မည် အပြာရောင်နိုင်းလ်သောမွေးဖွားသော တာနာကန်၏အကြီးဆုံး အီသီယိုးပီးနှင့်ဖြတ်သန်းသွားသည် ဆူဒန် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်အနီးမှာပထမဆုံးပူးပေါင်းပါ ၀ င်ဖို့၊ Khartoum.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြေထဲပင်လယ်အရှေ့တောင်ဘက်သို့ထွက်ခွာသွားသည် နိုင်းလ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဆယ်နိုင်ငံများမှတဆင့်သွားပြီးနောက်။ ထို့အပြင်အာဖရိကမြစ်သည်အမေဇုံမြစ်ထက်စီးဆင်းမှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုဗမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးနိုင်းလ်တွင်ရေသယ်ဆောင်နိုင်သည် အဆခြောက်ဆယ်လျော့နည်း။ ပြီးတော့အမေဇုံကလည်းကျယ်ပြန့်တယ်၊ အကျယ်ဆုံးအကျဆုံးက ၁၁ ကီလိုမီတာအထိရှိတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဂတိတော်အတိုင်း, ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုအကြံပေးသွားနေကြသည် အလှဆုံးသောနေရာများ မင်းနိုင်းလ်မြစ်ကမ်းနားမှာလည်ပတ်နိုင်တယ်။
၎င်း၏စတုရန်းကီလိုမီတာခုနစ်သောင်းနီးပါးရှိသောကြောင့်၎င်းသည် Superior ပြီးလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးရေကန်ဖြစ်သည် ကနေဒါ။ ကမ်းရိုးတန်းများတွင်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပါဝင်သည်။ တန်ဇန်းနီးယား, ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ y ကင်ညာ နှင့်မိဖုရားထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိသွားတဲ့ အင်္ဂလန်အောင်ပွဲ.
ထိုကဲ့သို့သောတိုးချဲ့မှုနှင့်အတူ, ကသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုရှိကြောင်းယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ် Murchison Falls သို့မဟုတ် Kabalega သည်ယူဂန္ဓာနိုင်ငံနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမြင့် ၄၃ မီတာအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သောကြီးမားသောရေတံခွန်ကြီး ၃ ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံမဟုတ်သော်လည်းနိုင်းလ်မြစ်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆည်အကြောင်းပြောနေကြသည်။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်ဆည်နှစ်ခုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ အမြင့်နှင့်အနိမ့်။ သို့သော်အထင်ရှားဆုံးမှာပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
မြစ်၏လျှံကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်executedရာမအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအရွယ်အစားက၎င်းကိုတိုင်းတာသည့်အချက်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးလိမ့်မည် အရှည်လေးကီလိုမီတာ y တစ်ရာနီးပါးအမြင့်။ ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်း၏အထူသည်ကဖြစ်ပါတယ် တစ်ကီလိုမီတာနီးပါး.
သူတို့မပျောက်ဆုံးစေရန်ထိုဒေသတွင်ရှိသည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုမဆောက်လုပ်မီကရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ သူတို့တွင် ဒေဗော်ဗိမာန်တော်မက်ဒရစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်လည်း Ramses II နှင့် Dendur သူများအသီးသီး Khartoum နှင့် New York သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
တည်ရှိသော ဆူဒန်, ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည် ကူရှိုင်းယားအဟောင်းကိုတက်စေသောနှစ်ခုထဲကတစ်ခု Nubia။ ၎င်းတည်ရှိမှုသည်ဘီစီ ၇ ရာစုမှစခဲ့သော်လည်းအေဒီ ၃၅၀ ခန့်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်မြို့ရိုး၏အကြွင်းအကျန်, ထိန်းသိမ်းထားကြသည် တော်ဝင်နန်းတော်အဆိုပါ အာမုန်၏ဗိမာန်တော် နှင့်အခြားအရွယ်မရောက်သေးသူ။ ဒါဟာကျနော်တို့နောက်ထပ်အကြောင်းပြောမယ့်အီဂျစ်spectacularရိယာတွေလောက်တော့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြီးမားသောရှေးဟောင်းသုတေသနတန်ဖိုး.
နိုင်းလ်ကမ်းရိုးတန်းများ၌လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများဖြစ်သည့်ရှေးအီဂျစ်တို့၏အထိမ်းအမှတ်များလည်းရှိသည်။ သူတို့တွင်ဘုရင်ချိုင့်ဝှမ်း၌တည်ရှိသူများသည်ထင်ရှားသည်၊ ရှေးကသြော Thebes ကြေငြာထား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
ချိုင့်ဝှမ်းသည်နယူးနိုင်ငံတော်၏ဖာရောမင်းများ၏သင်္ချိုင်းဂူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့နှင့်အလွန်နီးကပ်သောခမ်းနားထည်ဝါသောနေရာများဖြစ်သည် Luxor နှင့် Karnak တို့၏ဘုရားကျောင်းများအဖြစ်ဒါခေါ် Queens ၏ချိုင့်ဤအရာများ၏သင်္ချိုင်းများနှင့်အတူကျောက်၌တူးဖော်။ အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်နိုင်းလ်ကမ်းခြေရှိအထင်ရှားဆုံးအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့အမေဇုန်ကိုအာရုံစိုက်နေကြသည်။
အမေဇုံသည်နိုင်းလ်ထက်အနည်းငယ်တိုသော်လည်း၎င်း၏အရှည်သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ hydrographic cartographers သူတို့ကိုယ်သူတို့သဘောမတူ။
ယူနိုက်တက်စတိတ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ဌာန၏အဆိုအရအမေဇုံသည်အရှည်ရှိသည် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ။ သို့သော်ဘရာဇီးပထဝီဝင်နှင့်စာရင်းအင်းအင်စတီကျုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလေ့လာခဲ့သောဤမြစ်ကြီးသည်ပီရူးတောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ဘက်တွင်မြစ်ဖျားခံခြင်းမရှိဟုဖော်ပြခဲ့ပြီးထိုအချိန်အထိခန့်မှန်းထားသည်။ ကြောင်းနှင့်အတူ, အမေဇုံသည်နိုင်းမြစ်ထက်ပိုရှည်သည်။ သို့သော်အငြင်းပွားဖွယ်ရာမှာအသက်ရှင်ဆဲဖြစ်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်အများစုကအာဖရိကမြစ်ကိုကြာရှည်စွာစဉ်းစားနေကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စီးဆင်းမှု (သို့) အကျယ်ကိုအရှည်အစားအတိုင်းအတာအဖြစ်ယူမှတ်လျှင်အမေဇုန်သည်နိုင်းမြစ်ကိုထပ်မံအနိုင်ယူသည်။ ပျမ်းမျှတစ်စက္ကန့်လျှင်ကုဗမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ ရှိသည်။ အကျယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေဇုံကသူ့ရဲ့အဓိကအပိုင်းတွေမှာတိုင်းတာတယ် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ။ တနည်းအားဖြင့်အခြားတစ်ဖက်ကိုကမ်းခြေတစ်ခုမှမြင်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သည်နိုင်းလ်နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုပြသသွားကြသည် အလှဆုံးသောနေရာများ တောင်အမေရိကတောင်ကြီး၏မြစ်ဝှမ်း၌တွေ့နိုင်သည်။
မြစ်ကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်သောရေပမာဏသည်၎င်း၏ဘဏ်များသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတောတွင်းနေရာများတွင်နေထိုင်သောကြောင့်အဓိကအားဖြင့်တာဝန်ယူရသည် အမေဇုံ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေအတွက်အဆုတ်တစ်ခုဖြစ်သည် မရေမတွက်နိုင်သောဂေဟစနစ်တန်ဖိုး ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများပေါများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုကံမကောင်းစွာဖြင့်အမေဇုန်ဂေဟစနစ်သည်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ mult ကြီးများနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ပီရူးအမေဇုံတစ်ခုလုံးတွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးခရီးသွားများကိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကခေါ်ဆိုမှု၏အဓိကနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ရာဘာအဖျား ကြောင်းဒေသများစွာပျက်စီး။
အထဲတွင်သင်သည်လှပသောသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၂၀ ရာစုအစတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော Neo- Gothic အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်သည်။ နှင့်လည်း Casa del Fierro, Cohen နှင့် Moreyအဖြစ်ဟောင်း ဟိုတယ်နန်းတော်စတိုင်တစ်အံ့။ art deco။ The Main Square, သင် Obelisk သူရဲကောင်းများမှမြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ။
Manaus, Amazonas ၏မြို့တော်
ယုတ္တိနည်းအရ၊ ဤမြို့သည်အမေဇုန်သစ်တော၏မြို့တော်မဟုတ်သော်လည်းဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ဖြစ်သော်လည်းယောင်္ကျားလေးများအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဤစကားလုံးများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုသည် အမေဇုံ။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်တောတွင်းအလယ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏အမည်မှာပေါ်တူဂီတည်ထောင်သူများသည် Manaus အင်ဒီးယန်းများအတွက်ပေးဆပ်သည့်အခွန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အာရုံကြောစင်တာသည် San Sebastian ရင်ပြင်, အဘယ်မှာရှိအဖိုးတန်ခြင်းနှင့် impose Amazonas ပြဇာတ်ရုံ။ ရော်ဘာအလုအယက်ကာလအတွင်းဆောက်လုပ်ထားသောသာယာလှပသောအိမ်များနှင့်အတူသမိုင်းဝင်စင်တာကိုလည်ပတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ က အဒေါ့ဖိုလစ္စဘွန်းစျေးကွက်အနှစ်တစ်ရာကျော်သမိုင်းနှင့်အတူ အမေဇုံပြည်သူ့၏ယဉ်ကျေးမှုစင်တာရှေးခေတ်ကတည်းကတောတွင်းကြီးများနေထိုင်ခဲ့သည့်လူမျိုးစုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အံ့မခန်းဖွယ်ပြတိုက်ဖြစ်သည်။
Manaus ရှိ Amazonas ပြဇာတ်ရုံ
ဒီဘရာဇီးမြို့ဟာအဓိကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ် အမေဇုံမှတံခါးပေါက်ကမြစ်၏ခံတွင်း၌တည်ရှိ၏ကတည်းက။ ၎င်းသည်ဘရာဇီးဒေသ၏မြို့တော်လည်းဖြစ်သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံပါ ရှေးဟောင်းမြို့တော်များနှင့်ပြတိုက်များပြည့်နှက်နေသောမြို့ဟောင်းတစ်ခုရှိသည်။
သူတို့ကအစမီးမောင်းထိုးပြ Catedral Metropolitanaတစ် ဦး ဂန္ထဝင်ရတနာနှင့် သခင် Santo Cristo de Presépio de Belém၏ရဲတိုက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Ver-o-Peso စျေးကွက် မင်းနဲ့မြို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် Margal က de las Garzas ပန်းခြံ ၎င်းသည်ရာပေါင်းများစွာသောရေနေသတ္တဝါများကိုပြသသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မမေ့ပါနှင့် Rodrígues Alves ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၏ Bois က de Boulogne အားဖြင့်မှုတ်သွင်း ပဲရစ် ၎င်း၏အဆင်အပြင်, ဒါပေမယ့်ဇာတိသစ်ပင်ပန်းမန်မျိုးစိတ်နှင့်အတူ။
နိဂုံးချုပ်နှင့်နှင့်ပတ်သက်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမှပြန်လာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြစ်ငါတို့ပြောမယ်၊ အရှည်အားဖြင့်ဖြစ်တယ် နိုင်းလ်။ ဒါပေမယ့် Amazon ကခေါင်းစဉ်ကိုအသံအတိုးအကျယ်နဲ့ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ဘဏ်များအပေါ်တွင်ရှိသည် အံ့ဖွယ်အမှုများစွာ မင်းကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြစ်